Ifayibha Umthambo isinxibelelanisi Fast
Ifayibha Umthambo Hybrid Converter samandla
Ifayibha ye-Optic Pigtail
Isinxibelelanisi seNtambo esingamanzi
Fibre Umthambo vehicles Cable
Ifayibha Umthambo Cable Reel
Iplc yentsimbi ityhubhu
Izixhobo zeFiber Optic
IZiko leVidiyo kunye nePdf
Yasekwa ngo-2012, Dongguan Qingying Industrial Co., Ltd (Umgangatho）
Yasekwa ngonyaka ka-2010, iDongguan Qingying Industrial Co., Ltd (QY) yinkampani yefibre ephucukileyo ebekwe kwizixeko ezibini, iDongguan kunye neChongqing, e-China. Ngaphezulu kwe-10,000m2 yendawo yezityalo, i-QY ngoku iyinkampani enobuchule obudibeneyo be-R & D, imveliso, urhwebo kunye nentengiso yamanye amazwe. I-QY yi-ISO9001, i-ROHS, inkampani eqinisekisiweyo ye-CE enamakhulu abathengi eYurophu, eMelika, kwi-mpuma ye-Asia nase-Australia. Iimveliso zethu ezingundoqo ifayibha optic endle isinxibelelanisi installable (isinxibelelanisi fast), iadaptha, patch intambo, patch iintambo vehicles, pigtail, PLC yokuchaka, attenuator, kunye nezinye iimveliso ezininzi FTTH. Ngamava eminyaka eli-12 kushishino lwefayibha, i-QY ikholelwa ekubeni ukufunda, ukusebenzisana, kunye nokwabelana nabathengi yeyona ndlela ingcono yokukhula kunye nabathengi. Kule minyaka ilishumi izayo, i-QY iya kuphuhlisa ngamandla ukuvelisa iimveliso ezintsha ngokweemfuno zabathengi, kunye nokuphucula umgangatho weemveliso ezikhoyo zabathengi. Bonke abasebenzi be-QY bajonge phambili ekusebenzeni nasekusebenzisaneni nabathengi kwishishini le-fiber kwixa elizayo.
Inkampani iphambili kuPhando noPhuhliso
Inkampani iphambili kuPhando noPhuhliso, ukuThengisa, kunye nokuThengisa uluhlu olubanzi lweemveliso zefayibha kunye nonxibelelwano, kubandakanya iferrule yodongwe, isinxibelelanisi sefayibha, njl. Unikelo lweemveliso luyilelwe ukuhlangabezana nezona mfuno zibalulekileyo zabaxumi kwaye zithengiswa ikakhulu eYurophu nakuMntla Melika. Njengomntu ophakamileyo obuchwephesha kwishishini labucala, i-QINGYING iseke iindawo zeshishini kunye neemveliso zalo ezikumgangatho ophezulu. Izixhobo zokwenza i-Qingying ziyi-ISO 9001: 2000 ebhalisiweyo ukusukela nge-Matshi 2008.
QINGYING iquka iqela elizinikeleyo leengcali ezisencinci kunye nezinto ezintsha
QINGYING iquka iqela elizinikeleyo leengcali ezisencinci kunye nezinto ezintsha. Injongo yokuyila kunye nokuvelisa iimveliso eziphezulu kugcina ukhuphiswano lwenkampani kwindawo yentengiso. Namhlanje i-QINGYING yamkelwe kakuhle kushishino lonxibelelwano lwefayibha ngabathengi behlabathi. Isiko lobunkokeli kwitekhnoloji, umgangatho wemveliso kunye nenkonzo yabathengi yenze ukuba inkampani ikhule ngokukhawuleza. UKUGQIBELA ngoku wenze inkqubela ebonakalayo. Siyaqhubeka nokugcina isantya esikhulayo kwimfuno kunye nokuzabalazela ukugqwesa.
QualitY QSC52ZJ1 Optical Isinxibelelanisi esiKhawulezayo seA ...
Isicwangciso sokwakha se-5G e-China 2021
Ostreliya-iNethiwekhi yeSizwe yeNethiwekhi
Umnxeba: + 86-18046902377
Idilesi: Hayi. 101, Tangtian North Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong kwiPhondo, China.
Ifayibha isinxibelelanisi esikhawulezayo, Isinxibelelanisi esikhawulezayo, Ifayibha Umthambo isinxibelelanisi amaqhoshana, Isidibanisi seDuplex, Ifayibha Umthambo Cable izihlanganisi, Isixhobo soNxibelelaniso seNdawo,